Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Uluhlu lweeNcwadi eziKhuthazayo eziPhezulu zokukunceda ukhule
Iincwadi ziqulathe ubulumko obunamandla, obunokuguqula obunokutshintsha umkhondo wobomi bakho bonke. Oku kuya kwezempilo, ubutyebi, ubudlelwane, nayo yonke into ebaluleke kakhulu.
Ukuqhubeka nokukhula kunye nokutshintsha kwemihla ngemihla, funda nje iphepha lama-20 lencwadi enkulu! I-ROI ingummangaliso.
Nazi ezinye zeencwadi ezikhuthazayo zokukunceda ukhule.
Kwakhona, kukho ezinye iingcebiso zokufumana elona xabiso liphezulu kwiphepha ngalinye olityhilayo.
Nokuba oosomashishini abanamabhongo bayazi: inkuthazo iyadlula, kwaye akunakuze ubonakale ngathi uyayiqhatha ngexesha elifanelekileyo. Ngokufunda iphepha okanye ezimbini zencwadi ekhuthazayo, ufumana loo jolt kufuneka uyiqale.
"Imikhwa esi-7 yaBantu abaSebenzayo nguStephen R. Covey yincwadi enkulu enokukunceda uzive uvelisa ngakumbi kwaye ukhuthazekile, ”utshilo UMary Berry, uMseki kunye ne-CEO of ICosmos Vita. “Ibandakanya izixhobo zokufumana iziphumo ezinqwenelekayo ngelixa ugxininisa ukubaluleka kokukhathalela malunga noko kuvelisa iziphumo. Ngapha koko, ichaphazela izinto zokuzimela kunye nokuzilawula, ukuxhomekeka kunye nokusebenza nabanye, kunye nophuculo oluqhubekayo. Le ncwadi iza kukunceda uqonde zonke izinto ezibalulekileyo ekufuneka uziqwalasele ngelixa ufezekisa iinjongo zakho. ”
Inkuthazo, uqeqesho, imikhwa elungileyo-yintoni enye oyifunayo ukuze uphumelele?
Amava obomi ngoyena titshala ubalaseleyo, kodwa incwadi enkulu inokukunceda uqonde izinto kwinqanaba elinzulu kwaye wenze impumelelo ebalulekileyo ngamaxesha aphambili.
"Okubalulekileyo: Ukuphishekela ukuPhumelela okuqeqeshekileyo ukusukela kuGreg McKeown ulungisa yonke into ukuya kutsho kwizinto eziyimfuneko, ”utshilo UJared Pobre, i-CEO kunye noMsunguli we-Co-Founder of Ilebhu yeCaldera +. “Xa kuziwa kulawulo lwexesha, ayisiyokufumana yonke into phantsi. Imalunga nokwenza izinto ezifanelekileyo. Ukuzikhethela indlela esisebenzisa ngayo amandla ethu kusenza sikwazi ukunikela ingqalelo kwezona zinto zibalulekileyo. ”
Funda kubomi bokwenyani, kodwa sebenzisa izifundo ezivela ezincwadini kunye nokwandisa impumelelo.
Xa ufunda incwadi, ucofa engqondweni nakwintelekelelo yezona zikrelekrele zibalaseleyo emhlabeni. Ngubani onokudlulisa ithuba elinje, ngexabiso elikhulu kangaka?
"UJonathan Franzen ungomnye wababhali abaphilayo," utshilo UJorgen Vig Knudstorp, Sihlalo oLawulayo of IQELA leBrand Brand. "Incwadi yakhe yamvanje yingqokelela engeyonyani ethi, phakathi kwezinye izinto, iphikisane nokufunda nokubhala izincoko, nto leyo eyahluke mpela kwimilayezo ekhawulezileyo, kwizithuba zosasazo zasekuhlaleni, kunye nakwizihloko ezimfutshane zeendaba."
UFranzen ungomnye wabaninzi! Khetha umbhali omthandayo kwaye ukrazule yonke incwadi yabo ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo.
Kukangaphi sihlalutya ngokwethu isenzo kunye nokuziphatha kwethu? Ezinye iincwadi zifuna ukuba sijonge ixesha elide kwimikhwa yethu kwaye senze uhlengahlengiso xa kukho imfuneko.
“Enye yezona ncwadi zikhuthazayo endizifundileyo yile Amandla esiqhelo, Kutheni sisenza into esiyenzayo kuBomi nakwiShishini, nguCharles Duhigg, utshilo U-Ashley Laffin, uMlawuli oPhezulu kuLawulo lweeBrand at Ukungcola kukamama. “Yincwadi enkulu enokwenza ukuba uzive uvelisa ngakumbi kwaye unikwe amandla ngomsebenzi wakho. Le ncwadi igubungela ukuma nkqo, ukusuka kwezemidlalo ukuya kumashishini amakhulu e-DTC ukuya kwiintshukumo kwaye kujonga umdla kwisayensi engemva kwemikhwa. Iyaphonononga ukuba kutheni abantu beqhele ukwenza le nto kwaye ichaza nendlela ongaqhekeza okanye utshintshe ngayo imikhwa. ”
Yonke imihla esiphila kuyo inemikhwa, isempilweni okanye kungenjalo-yithathe ngokungathí sina le ncwadi!
Akusayi kuhlala kukho ubuninzi bempendulo entle xa uqala ishishini okanye ulandela usukelo ebomini, ngakumbi kwinqanaba lokuqala. Fumana incwadi ekukhuthazayo kwaye ikunike ingqondo efunekayo ukuze uphumelele.
“Ndikuthandile ukufunda Fumana ukuphumla nguGino Wickman kunye noMike Paton, ”utshilo U-Kiran Gollakota, uMseki-Co of Ikliniki yaseWaltham. "Ihobe malunga nendlela yokuhlala uzimisele njengenkokeli kunye nosomashishini xa kunzima ukubona ukukhanya ekupheleni kwetonela. Indifundise indlela yokujinga phantsi ndize ndiqhubele phambili nokuba ndibona ngathi akukho nto. ”
Ayisithi sonke esikhuthazwa yindlela yokubhala efanayo kunye nomxholo, ke fumana incwadi ekhanyisela loo mlilo.
Kukho amawaka eencwadi kuhlobo lokuzinceda, uninzi lwazo lugubungela umhlaba ofanayo kaninzi. Fumana iidayimani ezirhabaxa kwaye uzigcine kwishelufa yakho, kuba zinokuba namandla.
"Iincwadi zokuzinceda sele zithengiswa kakhulu, ziphantse zalishumi elinambini kodwa, kulwandle lokuphinda lusebenze kwakhona kwaye luthengise umxholo woosomashishini, ndikwazile ukufumana isixa esikhulu sobulumko kunye nesikhokelo kuJamie Schmidt's Umncedisi omkhulu, ”Utshilo Nik Sharma, CEO of Iimpawu zeSharma. “I-Schmidt ibonelela ngolwazi olukhulu lwebhanki kwisikhokelo malunga nokukhula kweshishini, uphawu, ukukhula, iintlobo ezahlukeneyo zezentengiso, ukwanda, ukuzibandakanya kwabathengi kunye ne-PR. Yayincwadi yeshishini lokugcina izinto endinokuzisebenzisa ngokulula kwisicwangciso sam seshishini esiphele sasisinceda ukuba sikhule ngokukhawuleza kunokuba besilindele. ”
Ungalibali ukusebenzisa oko ukufundileyo kwiincwadi zokuzinceda, kungenjalo, kukufunda elwandle kuphela.
Ukuqonda iTekhnoloji eNtsha
Kutheni le nto ucinga ukuba ii-CEOs kunye neenkokheli zeshishini zihlala zifunda iincwadi ezintsha? Yile ndlela bafunda ngayo ngeendlela ezintsha, ubuchwepheshe obuvelayo, kunye nezinye izinto ezibanika umda kwishishini.
"Ndifumene Abayili bezobugcisa Inomdla omangalisayo kunye nenkcazo elungileyo ye-AI- ibalulekile kwilizwe elihamba ngokukhawuleza kwaye lijongane nemibuzo yokuziphatha kule ndawo, utshilo U-Andrew Penn, i-CEO kunye noMlawuli oPhetheyo at Telstra.
Ayisiyiyo kuphela le miba inomdla, kodwa iya kukunceda uphumelele nakwishishini.
Ingqondo yomntu sesona sihloko sinomdla kunazo zonke, kwaye zininzi iindlela zokufaka iziphumo zeklinikhi kumdlalo weshishini. Funda ngaphezulu kwengqondo ukuze uziqonde ngcono wena nabanye.
“Isazi ngengqondo uCarol Dweck ucela umngeni ngokubaluleka kokuba nengqondo yokukhula kwincwadi yakhe, Ingqondo yengqondo: I-Psychology yeMpumelelo, ”Utshilo UGqr Robert Applebaum, Umnini of I-Applebaum MD. “Ucinga ukuba okoko nje sizingisayo siza kuqhubeka nokukhula. Kwi Umlingo wokuCinga ngokuKhulu, UDavid J. Schwartz ubambelele ekubeni logama nje sikholelwa kwiziqu zethu, sinako ukoyisa nayiphi na injongo esinokuyicinga. Zombini ezi ncwadi zingena kumandla engqondo kunye nomthamo wolawulo esinalo kwiziphumo zobomi bethu. ”
Ngokucinga okubukhali kunye nengqondo eyomeleleyo, ungaphulukana njani?
Oosomashishini abaninzi baqala uhambo lwabo ngenjongo eyomeleleyo, kodwa inokuba fuzzy ngokuhamba kwexesha ngenxa yoxinzelelo, ukudinwa kunye nokuzithemba. Funda iincwadi ezinceda ukufumanisa kwakhona loo njongo kwaye unamathele kwisicwangciso somdlalo.
“KwiSimon Sinek Qala ngesizathu: Iinkokeli eziKhulu ziKhuthaza njani wonke umntu ukuba athathe inyatheloUkwazi injongo yakho yeyona nto igcina ishishini lakho lisendleleni yokuyizalisekisa de ekugqibeleni wenze, ”utshilo URym Selmi, uMseki of MiiRO. Ngaphandle kwesizathu sakho, ishishini lakho liza kuphulukana nembono yokuba kutheni likho, kwaye abathengi abasayi kuba nesizathu sokuthenga kuwe. Ingcali yeengqondo u-Angela Duckworth uthi kwincwadi yakhe, I-Grit: Amandla oMnqweno kunye nokuzingisa, Ukugcina ukungaguquguquki kwexesha elide kuya kukhokelela ekufikeleleni kwiinjongo zakho. Ezi ncwadi zinika ukuqonda okukhulu ngokubaluleka kokuhlala ugxile kwinjongo yakho. ”
Akukho ncwadi iya kutyhila injongo yakho ngqo kuwe, kunjalo. Oko kuphezu kwakho!
Awudingi ukuba ngusomashishini ukuze ufumane ixabiso kwiiklasikhi kuhlobo olo. Izifundo ezinje ngobutyebi kunye nolawulo lobudlelwane kwindalo iphela, ke qala ukufunda ezinye zezintandokazi zesikolo esidala.
“Zininzi kakhulu iincwadi ezindikhuthazayo kuyo yonke le minyaka, kunzima ukubala nje ezimbalwa,” utshilo U-Aidan Cole, uMseki-ntsapho of I-TatBrow. “Njengosomashishini, UTata Ocebileyo Ubaba NguRobert Kiyosaki yayifundwa kakhulu. Incwadi ithetha ngumahluko phakathi kwamatyala kunye neeasethi, ngokuqinisekileyo ufuna iiasethi ezingaphezulu kwamatyala. Ikwathetha ngumahluko phakathi kokuba ngumqeshwa, umntu ozisebenzelayo, umnini-shishini kunye notyalomali. Enye incwadi enkulu yile Indlela Yokuphumelela Abahlobo Nefuthe Abantu nguDale Carnegie. Le yeyona ncwadi ibalulekileyo ebomini, ikufundisa izinto ezinjengokuba nomdla ebantwini ukuze ube nakho ukwakha ubudlelwane obuhlala ixesha elide! ”
Ezi ziindidi zeencwadi ezihlala zinika kwaye kufanelekile ukuba zifundwe kaninzi. Ungaze ubavumele bashiye ishelufu yakho.
Ukukhula kunye neGrit
Iincwadi zenza umsebenzi omkhulu wokuchaza iikhonsepthi ezinzima, kodwa zikwabonisa ukukhanya okukhanyayo kwimibono elula yeziphumo eziphambili. Lowo ngumlingo wamagama.
"Ngokutsho kwesazi ngengqondo u-Angela Duckworth, isitshixo sempumelelo sixhomekeke kubuhlanti," utshilo UCarrie Derocher, uCMO of Ubungakanani beNqaku. "Incwadi yakhe, I-Grit: Amandla oMnqweno kunye nokuzingisaUxoxa ukuba okoko uhlala uhambelana ixesha elide, uya kuthi ekugqibeleni ufikelele kwiinjongo zakho. Kwincwadi yakhe yenkuthazo, Ingqondo yengqondo: I-Psychology yeMpumelelo, UCarol S. Dweck ujolise kwingcinga yokuba ukukhula kwengqondo kuyakuqhubela phambili kwiinzame zethu zokuqhubeka nokukhula. ”
Unokufumana intsingiselo, inkuthazo, kunye nokunye okuninzi kwiincwadi ezilungileyo. Ingaba ulunde ntoni?
Iingcebiso zomsebenzi okude
Ezinye iincwadi zifunda ngakumbi njengeencwadana zemiyalelo okanye iiplani ukufezekisa iziphumo ezithile. Oku kunokuba lutshintsho lwesantya kwinto othanda ukuyifunda ngexesha lakho elongezelelekileyo, kodwa iziphumo zingabonakala.
“Sisandula ukukhululwa Ulwimi lweDigital Body: Uyakha kanjani iTrust kunye noQhagamshelo, ngaphandle koMba nguErica Dhawan uvavanya ulwimi lomzimba kwihlabathi ledijithali, ”utshilo UTyler Forte, uMseki kunye ne-CEO of Amakhaya kaFeliks. “Ngoku ekubeni iiofisi ezininzi ziye zafudukela kwimekobume engumxube, unxibelelwano olusebenzayo aluzange lubaluleke kangako. Ngokunyuka kweentlanganiso, ukufunda ukuguqula indlela umzimba oziphethe ngayo kuya kukunceda uzibandakanye kwaye ukhuthaze abasebenzi bakho. ”
Kuhlala kunexabiso ekufundeni izakhono ezitsha, kwaye iincwadi zinokukhawulezisa le nkqubo iphindwe kalishumi.
Ukuba uziva unamathele cala okanye ufuna nje ukutsiba ebomini, lixesha lokuba uqhekeze incwadi ekhuthazayo. Kuthatha nje amaphepha ambalwa ngaphambi kokuba ufumane umbono obalulekileyo kwaye mhlawumbi unesityhilelo esincinci okanye ezimbini.
"Ingqondo yokuKhula nguJoshua Moore noHelen Glasgow bangena kwindlela yokugcina uphando, ”utshilo U-Eric Gist, uMseki-ntsapho of I-OS eyoyikisayo. Kusoloko kukho indawo yokukhula, kwaye asize siyeke ukukhula. Indibonisile ukuba ndingajonga njani amathuba amatsha kwaye ndiqhubeke nokufunda kwikhondo lam lomsebenzi. ”
Ngamanye amaxesha, amagama afanelekileyo anokukunceda uphume kwislump kunye nenqanaba phezulu kanye ngomzuzu olungileyo.
Akukho nto ikhuthazayo njengokufunda ngabantu bokwenyani kunye nokwenza kwabo izinto ezintsha kunye nokuphumelela. Ayisiyonto inomdla kuphela, kodwa ibonisa ukuba unokwenza okufanayo.
"Izixhobo zeTitans: Iitactics, iiRoutines kunye neMikhwa yeebhiliyoni, ii-Icons, kunye ne-World-Class Performers kukudityaniswa kwamabali akhuthazayo ngu-Tim Ferriss oshishino, ”utshilo UJoshua Tatum, uMseki-weNtsebenziswano of Iinkcubeko zeCanvas. “La mabali abonisa ukulunga, okubi nokubi kobomi beebhiliyoni, imifanekiso yonqulo kunye namabali, enika imephu yokwenene yendlela eya empumelelweni. Ukuzibandakanya kunye nokukhuthaza, uya kufuna ukwabelana ngala mabali neqela liphela. ”
Funda ukuba bayenze njani, balandele emanyathelweni abo, kwaye ushiye uphawu lwakho emhlabeni.
Impumelelo Ngaphandle kokungaqiniseki
Intetho yokwenyani-sonke sinokungazithembi amaxesha ngamaxesha. Ngamaxesha anzima, sinokuzuza kwiincwadi ezisigcina sisisiseko kwaye zivuselela ukuzithemba kwethu. Yindlela ebhetele leyo kunokuhlala uncamathele kwiindaba zekhebula!
“Ukufunda indlela yokuchonga nokubamba amathuba ngexesha lesiphithiphithi kukugxila Yenza ikamva + kwiNcwadana yokuNtsha: Iindlela zokuCinga ngokuPhazamisa nguJeremy Gutsche, ”utshilo U-Shahzil Amin, uMlingane oLawulayo kwi-Karlani Capital kunye noMsunguli we-Emagineer kwaye Ngaphambi kokuba. “ICOVID-19 itshintshe indlela esishishina ngayo. Ngexesha lobhubhane, iinkampani ezininzi zisilele ngenxa yokunqongophala kokuqonda kunye nokuguquguquka. Ukanti abanye baphumelele ngokusebenzisa ukucinga okuphazamisayo ukufumanisa utshintsho kwiimfuno zabathengi kwaye bavele ngokukhawuleza ukubahlangabeza. Oku kubalulekile emva kokufundwa kwesi sifo kumashishini aqhubela phambili. ”
Musa ukubanjwa ungalindelanga ziziganeko zehlabathi. Lungiselela ngokufunda iincwadi ezifanelekileyo kwaye usebenzise i-mindset ye-agile.
Unxibelelwano lwethu nabanye abantu lubaluleke kakhulu kubomi obonwabisayo nobunempumelelo. Kukho ezinye iincwadi zakudala ezisinceda ukuba sakhe kwaye silawule ubudlelwane ngokukuko, ke ungaphoswa lithuba lokuzifunda kwangoko.
“Ukuba ufuna abantu bakuthande, yeka ukubagxeka, uDale Carnegie ushumayela kwincwadi yakhe, Indlela Yokuphumelela Abahlobo Nefuthe Abantu, ”Utshilo UMichael Scanlon, i-CMO kunye noMsunguli-we-Co of Roo Skincare. “Akukho mahluko ubalulekileyo phakathi kolwalamano lomntu kunye nolwalamano lweshishini. Xa kuziwa kubugcisa bonxibelelwano, bobabini basebenzisa imigaqo efanayo. Enye incwadi ekhuthazayo nguDavid J. Schwartz ', Umlingo wokuCinga ngokuKhulu, ezibonelela ngeendlela eziluncedo ekuzifundiseni ukucinga nokuziphatha ngendlela eya kufezekisa yonke iminqweno yakho. ”
Ngokuqinisekileyo, unokubukela iividiyo okanye ufunde iikowuti, kodwa akukho nto ibetha amava encwadi yokwenyani.
Imikhwa kunye neeRoutines
Sonke izidalwa ezinomkhwa. Umbuzo ngowokuba - yeyiphi imikhwa ekuncedayo uphumelele, kwaye yeyiphi ekubambezelayo?
"Eyona ncwadi ibalaseleyo ekufuneka ifundwe ziinkokheli"Imikhwa esi-7 yaBantu abaPhezulu”Utshilo UJason Wong, CEO of Doe Imivumbo. “Le ncwadi iyatshona ekudaleni eyona mikhwa mihle ukuze uphumelele emhlabeni kwaye uyiqhekeze ibe ziingceba ezetyiswayo. Ndiyicebisa kakhulu nakubani na. ”
Njengoko uSocrates watsho, ubomi obungachazwanga abufanelanga ukuba buhlale, ke qala ukufunda kwaye ufumane okungakumbi malunga nawe nendlela ohamba ngayo kwihlabathi.
Incwadi ayifuni ukuba ibe sisicatshulwa sephepha elinewaka ukuze isebenze kwaye iluncedo. Ezinye zeencwadi esizithandayo zilula kwaye kulula ukuzifunda ngomyalezo ocacileyo, nobonisa jikelele.
"UPaul Arden"Ayisiyiyo Indlela Olunge Ngayo, Yindlela Ofuna Ukuba Ngayo Ngeyona Ndlela: Eyona Ncwadi Ithengisa Kakhulu Ehlabathini ” isikhokelo esikhwameni sendlela yokuphumelela sikunika iingcebiso ezikhawulezayo kunye nobulumko onokubusebenzisa kwishishini nakubomi bakho, ” utshilo uGqirha Zachary Okhah, uMseki kunye noGqirha oyiNtloko at PH-1 Miami. Ngobugcisa be-quirky, ukufota, kunye nemizobo, izele ngumdla. Akunjalo ukuba Ulunge kangakanani igubungela yonke into ukusuka kwimibono yobudenge ekuncedeni woyise iibhloko zengqondo ukuya ekugxothweni kunokuba yinto elungileyo. Yincwadi ephathekayo onokuyisebenzisa xa ufuna ukuqonda okukhuthazayo. ”
Kungenxa yokuba incwadi inde kwaye inzima, ayisoloko ithetha ukuba ilungile! Ngamanye amaxesha ufuna ukuyigcina ilula.
Xa ufumana i-nugget yobulumko kumaphepha encwadi enkulu, ihlala nawe ngonaphakade, kwaye akukho mntu unokuyithatha. Kwaye, ngakumbi ubulumko oboqokelelayo, kokukhona uya kulungela ngakumbi ukujongana nemiceli mngeni enzima ebomini.
"Ngaphakathi Indlela Yokuphumelela Abahlobo Nefuthe Abantu, enye yezona ncwadi zithengwa kakhulu, uDale Carnegie ucebise ukuba sikhuphe amehlo kuthi kwaye sibonise umdla kwabanye ukuba sifuna ukuthandwa, ”utshilo. I-Haim Medine, uMsunguli weNtsebenziswano kunye noMlawuli woBuchule at UMark Henry Ubucwebe. Eli cebiso alinxulumene nobudlelwane bobuqu kuphela, liyanceda ekwakheni ubudlelwane bobungcali. Ukuba siyayikholelwa, singayiphumeza Umlingo wokuCinga ngokuKhulu. Singayifumana yonke loo mnqweno ebomini bethu ngokudala iziqinisekiso eziqinisa ezo nkolelo. ”
Ngeengcebiso ezingaphezulu kweshumi leencwadi ezivela kwiinkokheli zeshishini ezinkulu, une-stack ekufuneka usebenze kuyo. Layisha umthwalo wakho we-e-reader okanye ubambe amanye amaphepha-nantoni na oyenzayo, ungaze uyeke ukufunda!